Admin | Trading Myanmar Ad Portal
I don't want to wait things happen but I want to make things happen. I don't want to work for money but I want money work for me. If I assume myself is responsible, I will have the responsibility. If I pretend not to know doesn't mean that I don't know anything. I will not do anything that God doesn't like but I do everything what I like. Seeing is believing and everything is possible. This is it!
ထီးလှိုင်ရှင် Business Group
Business Directory, Business Services, Free Business Listing, Services | admin | January 19, 2014
ထီးလှိုင်ရှင် ကုမ္မဏီထောင်၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း၊ စာရင်းကိုင်နှင်...
Customized Product Design & Production
Business Directory, Business Services, Free Business Listing, International Business Listings, Other Services, Other Stuffs to Sell, Services, Wanted, Website Submission | admin | January 10, 2014
FNTE : From Nothing To Everything ＊Customized Product Design & Production　＊Agent Product Promotion & Sale　＊Brand Gift Your satisfaction is always the ...
Business Directory, Education Services, Fashion and Lifestyle, Other Services, Services, Training & Classes, Website Submission | admin | January 4, 2014
Facebook Account တကယ်လိုအပ်နေသူများကိုအခမဲ့ဖွင့်ပေးပါသည်။Please Support Our Team By Sharing :) Facebook Account တကယ်လိုအပ်နေသူများကိုအခမဲ့ဖွင့်ပေးပါသည်။ အ...
Air-Con, Refrigerator, Washing Machine | Installation, Repairing, Sales
Business Directory, Business Services, Fashion and Lifestyle, Free Business Listing, Other Services, Services, Training & Classes, Wanted | admin | January 3, 2014
ZAW MOE Air-Con, Refrigerator, Washing Machine Installation, Repairing, Sale and Service Center
December Special Promotion 20% Off
Business Directory, Business Services, Free Business Listing, Services, Website Submission | admin | December 8, 2013
ဖီးနစ်(စ်)အင်ပါယာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုမှ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စတီးအလှဆင်လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုးကို ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာအထူးပရိုမိုးရှင်း အနေနဲ့ ၂၀% တိတိလျော့ဈေးဖြ...
Business Directory, Food and Beverages, International Business Listings, Wanted | admin | December 1, 2013
ထိုင်ဝမ်သို့ ကွမ်းရွက်တင်ပို့ နိုင်သူ ဆက်သွယ်ပါ။ We areatrading co. in Taiwan, We are searching for cooperative trading company to import betel leaves. If...
ETC Engineering Training Centre
Business Directory, Education Services, Free Business Listing, Services, Training & Classes, Tuition, Wanted | admin | November 22, 2013
၂၀၁၄ -၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူ များအတွက် ဘာသာရပ်အားလုံးကို မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ ရ ဆရာ/မ များကိုယ်တိုင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း (Text) ပြီးမြောက်ေ...
Business Directory, Business Services, Free Business Listing, Other Services, Services | admin | November 20, 2013
လူကြီးမင်းတို့၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ကြော်ငြာစားသားများကို ( T-Shirt, Sport Shirt,ထီး၊ ဖန်ခွက်၊ ဘော့ပင်၊ Calendar ၊လက်ဆွဲအိတ်အမျိုးမျိုး၊ ဦးထုပ်၊ အလံ၊ ယပ်တောင်၊ Rec...
For sell New house. ( Ready for stay)
Property, Property for Sale | admin | November 4, 2013
For sell New house. ( Ready for stay) * Place : North Dagon , 37 near main road, Thu kha main street. * 40' x 60 ' ( permit land) * Living room,2bed...
Comments Off on ရန်ကုန် မြို့ နယ်တွေရဲ့ Postal Code များ
ရန်ကုန် မြို့ နယ်တွေရဲ့ Postal Code များ
admin | News | November 10, 2013
အင်တာနက်သုံးစွဲမှု များပြားလာတဲ့ခောတ်ကြီးမှာ Online Registration လုပ်တိုင်း၊ လိပ်စာဖြည့်တိုင်း ကိုယ့်နေတဲ့ မြို့ နယ်ရဲ့ Postel Code ကိုမသိလို့ ခဏခဏ …
Comments Off on 100schools
admin | News | November 9, 2013
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျောင်းပေါင်းတစ်ရာလှူဒါန်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ပါရမီရှင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားပြီး ဖွံ့ ဖြိုးမှုအားနည်းနေတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ကလေးငယ်များအခက်အခဲမရှိ စာသင်နိုင်ဖို့ ပညာဒါန ကျောင်းပေါင်းများစွာ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနေတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံသား Mr. John D. Stevens ရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ဒါနပါရမီဟာ အထူးအားကျ အတုယူဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ကျောင်းပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်တဲ့ထိ ဆောက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တည်းကစပြီး ..
Comments Off on who is smart
admin | News | November 2, 2013
ဘယ်သူက ငပိန်းလဲ …
အမျိုးသားတစ်ဦးမောင်းနှင်လာသောကားနှင့် အမျိုးသ္မီးတစ်ဦးမောင်းနှင်လာသောကား မတော်တဆတိုက်မိပြီး ကားနှစ်စီးလုံး ကြေမွသွားသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ လူကတော့ တစ်ယောက်မှ ဒဏ်ရာမရဘဲ ကားထဲမှတိုးသျှိုးထွက်လာကြသည်။
အမျိုးသ္မီးကပြောလိုက်တယ် “ကြည့်စမ်း ….
Comments Off on လေ လည်တဲ့အခါ အနံ့ ဆိုးတွေကိုသန့် စင်ပေးမယ့် အတွင်းခံဘောင်းဘီ
လေ လည်တဲ့အခါ အနံ့ ဆိုးတွေကိုသန့် စင်ပေးမယ့် အတွင်းခံဘောင်းဘီ
admin | News | October 25, 2013
Shreddies ( ၂၃ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃ )
မကြာခဏ လေ လည်ခြင်းဟာ လူတိုင်းအတွက် ကျန်းမာရေး သဘာဝဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်ပါ။ အနံ့ ဆိုးထွက်တတ်တဲ့ ထိုဖြစ်စဉ်ကို လူတစ်ချို့ က ရှက်စရာကိစ္စတစ်ခု လို့ ထင်မြင်ပြီး အဲဒီ လေ လည်သောလူနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး မှာ ရှောင်နေတတ်ကြပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီ ပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို …..
Comments Off on ရွှေသစ်ပင်တွေကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံ မှာ တွေ့ ရှိ
ရွှေသစ်ပင်တွေကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံ မှာ တွေ့ ရှိ
ရွှေသစ်ပင်တွေကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံ မှာ တွေ့ ရှိ (၂၃-၁၀-၂၀၁၃)
သြစတြေးလျ သိပ္ပံ ပညာရှင် အဖွဲ့( CSIRO ) commonwealth scientific and industrial research organization ဟာ ရွှေမှုန့် များပါဝင်တဲ့ အရွက်တွေနဲ့ဖုန်းလွှမ်းနေတဲ့ ယူကလစ်ပင်များကို သြစတြေးလျ နိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက် Kalgoorlie လို့ ခေါ်တဲ့ ဝေးလံ ခေါင်သီတဲ့ ဒေသမှာ တွေ့ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ ယူကလစ်ပင်တွေရဲ့သစ်မြစ်တွေဟာ …..
Comments Off on QR code ဆိုတာ
QR code ဆိုတာ
admin | News | October 19, 2013
QR code ဆိုတာ…
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များ ဂျပန်နိုင်ငံ စီးပွားရေး အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဈေးကွက်ဝယ်လိုအား၊ ရောင်းလိုအား များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြည့်ဆီးနိုင်ဖို့Bar Code System ကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ ရှိရမဲ့ သီးသန့် အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စူပါမတ်ကက် ကောင်တာတွေမှာ အရောင်းဝန်ထမ်းများရဲ့ စာရင်းတွက်ချက်ရာမှာ အချိန်ကုန်မှုကို ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Bar Code နည်းပညာကိုတဆင့်ထက်တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကြိုးပမ်းရင်း …..
Comments Off on Easy and Stylish Dotted Nail Art Design
Easy and Stylish Dotted Nail Art Design
admin | News | October 15, 2013
အလွယ်ကူဆုံး လက်သည်းဒီဇိုင်း လှလှလေးလုပ်နည်း
ခုလက်သည်းဒီဇုိုင်းအတွက်တော့ လက်သည်းဆိုးဆေး အရောင်သုံးရောင်နဲ့ လက်သည်းဆိုးစုတ်တံအပါးလေးပဲလိုပါတယ်…။ စုတ်တံမရှိတဲ့သူတွေလည်း ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်…။ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့လဲ လုပ်လုို့ရပါတယ်…။ ဥပမာအနေနဲ့တော့ အဖြူ အနက် ခဲရောင်လေး သုံးထားလုိုက်တယ်…။
၁) လက်သည်းဆိုးဆေးသုံးရောင်ကို လက်ငါးချောင်းလုံး အစဉ်တိုင်းဆိုးပြီး …..
Comments Off on Chinese husband sues wife for being ugly, wins $120,000
ယောက်ျားက ဇနီးသည်ကို လိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲ
တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ Jian Feng ဟာသူ့ အမျိုးသမီးကို ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီး တရားစွဲခဲ့ရာမှ ဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ လျှော်ကြေးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ …..
Comments Off on World’s Most Valuable Brand
World’s Most Valuable Brand
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် Apple ရပ်တည်
New York အခြေစိုက် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Interbrand ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၃ အတွင်း ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အထဲမှာ Apple က နံပါတ် ( ၁ ) ချိတ်သွားပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် Google က ဒုတိယ နေရာကို ရရှိပြီး …..
Comments Off on how to use Trading Myanmar Ad Portal – Video
how to use Trading Myanmar Ad Portal – Video
admin | News | October 13, 2013
မြန်မာ အခမဲ့ကြော်ငြာ ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် အသုံးပြုပုံ ဗွီဒီယို
Trading Myanmar Ad Portal ရဲ့ Fan တစ်ယောက်က ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်ကို ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ၊ နားမလည်ဘူး၊ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ပြောလို့ ၊ ထိုနည်းတူ အခက်အခဲရှိနေသောသူငယ်ချင်းများ အသုံးပြုရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက် ဒီ Video Clip လေးကို စေတနာအရင်းခံ နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုရာမှာ အဆင်မပြေမှုနဲ့ ကြုံရင်ဖြစ်စေ …..
Comments Off on2year old boy, gave birth twin
2 year old boy, gave birth twin
admin | News | October 4, 2013
၂ နှစ်သား ကိုယ်ဝန်ဆောင် ယောက်ျားလေး မှ ကလေးအမွှာမွေး
( အောက်တိုဘာ ၊ ၁၊ ၂၀၁၃ )
တရုတ်ပြည်မှ ဆရာဝန်များဟာ ၂နှစ်သား အရွယ်ကလေးငယ်လေးရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာ ဆက်လက်ကြီးထွားမှု မရှိတော့တဲ့ သန္ဓေသားတွေကို တွေ့ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ရှောင်ဖန်း လို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီ ကလေးငယ်လေးဟာ ဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ အခါမှာ သူ့ ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဟာ အရမ်းကို ဖောင်းကားနေတဲ့ အတွက်အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်လိုက်ရတာပါ။
အဲဒီ သန္ဓေ သားတွေဟာ အရှည် ၂၀ စင်တီမီတာ ရှိပြီးတော့ …..
Comments Off on Ishin-Den-Shin system plays spoken messages through your finger
Ishin-Den-Shin system plays spoken messages through your finger
admin | News | October 2, 2013
လက်ညှိုးကနေ သတင်းနားထောင်လို့ ရတဲ့ Ishin – Den – Shin နည်းပညာ
( အောက်တိုဘာ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၃ )
Disney မှ သုတေသန ပညာရှင် Ivan Poupyrev က လက်ညှိုးမှတဆင့် သတင်းနားထောင်လို့ ရတဲ့ နည်းစနစ်ကို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နားရွက်ကို တစ်ခြားလူတစ်ယောက်က လက်ညှိုးနဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့ သတင်း အသံတွေကို ကြားရမှာပါ။ လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသံလွှင့်စက်လိုမျိုး ပြုလုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာပါ။ လူတင် မဟုတ်ပါဘူး ဓား ၊ ခေါင်းလောင်းလို ပစ္စည်းမျိုးရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို …..
Comments Off on Child with two heads
Child with two heads
admin | News | September 27, 2013
ဦးခေါင်း အပိုတစ်လုံးပါသည့် ကလေးအား အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်
( စက်တင်ဘာ ၊ ၂၆ ၂၀၁၃)
အန္တရာယ် များလှတဲ့ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပိုနေတဲ့ ဦးခေါင်းတစ်လုံးကို အောင်မြင်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃လ အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Asree Gul ဟာ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ …..
All times are GMT 6.5. The time now is 8:11 pm.